Maitiro Ekudzora Screen Kupenya Pane Yako iPhone: YaAmai Kugadziriswa. - Iphone
iphone 5s bhatiri haigare
sei iTunes isingazive iphone yangu
sei isnt ipad yangu ichiraja
Zvinorehwa neshirikadzi nhema dandemutande muzviroto
zvinomiririra makadinali matsvuku
Maitiro Ekudzora Screen Kupenya Pane Yako iPhone Saka Hazvizoremedze Vamwe ... Sevana Vako
Vana vangu vanoverevedza ninja diki. Just pandinofunga kuti vakarara, ivo pop up for round two yemutambo unonzi GO TO BED. Ndine chokwadi chekuti vazhinji venyu makatamba mutambo uyu zvisati zvaitika - ndiwo matani ekunakidzwa (mutambo wangu wandinofarira, zviripo). Saka dzimwe nguva, ndinoona zvakakodzera kuti kuderedza kupenya kwescreen pane yangu iPhone, iPad, kana iPod.
Pane dzimwe nguva apo ini ndiri kuudza mwanasikana wangu kuti aende kunorara, uye iye anondibvunza ini nei ndichiwana kugara uye kushandisa yangu iPhone. Ndinomuudza kuti ndinofanira kuramba ndakamuka kuti ndione kuti anoenda kunorara. Inoshanda-dzimwe nguva. Ini zvakare ndine musikana ane mwedzi minomwe ekuberekwa uyo anoda kubatwa, uye handidi kuti yangu inopenya inopenya iPhone inomumutsa iye kana iro rima rakasviba.
Saka heano matipi mashoma ekuti ungaite sei deredza kupenya kwescreen pane yako iPhone, iPad, kana iPod. Aya matipi zvakare anobatsira enzvimbo kwaungangoda kutarisa foni yako mune yakasviba kamuri senge bhaisikopo remitambo, asi uko iyo skrini inonongedza iwe sechiedza. (Usakanganwa kuisa foni yako chinyararire mune dzino zviitiko!)
Pese pandinofanira kutumira murume wangu mameseji kuti ndimuudze kuti ndedzipi zvigaro zvatiri iye ari mumutsara panzvimbo yemvumo, ini ndinoshandisa nzira idzi kudzikisa kupenya kwangu kwescreen. Zvikasadaro, zvinoita sekunge wavhura iro remashiripiti bhokisi, uye mwenje kubva mukati unoshambidza kumeso kwako muchiedza, uye haudi izvozvo kana iwe uchiedza kuradzika vana kana kushandisa foni yako mune yemitambo yemitambo.
Zvinopesana Zvinokwezva: Uchishandisa Invert Colors Kuti Flip Iyo Script
Chinja Colors sarudzo mu Zvirongwa iyo vamwe vanhu inodaidza X-Ray Mode. Vazhinji vanhu vanogona kugumburwa pane ino marongero netsaona. Izvo chaizvo zvinoshandura ese mavara kune avo vanopokana. Dema rinoita chena, girini rinova repingi, uye bhuruu rinoita orenji. Kana iwe ukaroora iyi yekugadzika nekudzikisa iyo Kupenya nhanho, iwe unoderedza iyo yakazara skrini kupenya pane yako iPhone.
Iyi yekugadzika yakanakirawo kana iwe uchida kuenda online kana kuverenga eBook. Ichashandura kumashure kusviba uye mavara machena, saka zvinonyanya kudzora kupenya kunouya kubva pachiratidziri.
Sei iTunes isingaone yangu iphone
Kuti uvhure Invert Colors, enda ku Zvirongwa> Zvakajairika> Kuwanika wobva wadzvanya switch padhuze ne Chinja Colors kuibatidza. Kana switch irimo, ichave iri green.
Tevere, gadzirisa iyo Kupenya yeiyo skrini pane yako iPhone kubatsira kubatsira kubwinya. Kupenya inogona kugadziriswa uchishandisa iyo Kudzora Center by kusvetuka kubva pasi pechiso. Inogona zvakare kuwanikwa nekuenda ku Zvirongwa> Ratidza & Kupenya. Iwe unogona kugadzirisa iyi yekugadzika nekutsvedza bhatani kune chaunoda mwero wekujeka.
Grayscale: Kuona Iyo Nyika Mune makumi mashanu Shades EGrey
Nepo kuiswa uku kuchinyanya kuitirwa avo vasina ruvara-bofu, zvinobatsirawo kudzikisa kupenya kwemavara kunouya kubva pachiratidziri chako. Unogona kuwana mamiriro aya nekuenda ku Zvirongwa> Zvakajairika> Kuwanika, wobva wachinja switch iripedyo ne Girisi kuva girini.
Kana iwe ukaroora Grayscale ne Kupenya level pane yako iPhone kudzikisa kuburitsa kwechiedza, zvinonyatso kupa iyo skrini yunifomu ruvara. Aya marongero akanaka kumitambo uye anopenya maapplication, uko iyo Chinja Colors kuseta kunogona kutokanganisa. Ndichiri Chinja Colors yakanakira kuverenga kana mameseji, Grayscale yakanaka kune Graphics kubatsira kudzikisa kupenya pane yako iPhone.
Auto-Husiku Musoro Mune iBooks: Chisikwa cheIhwo Husiku
Ini ndinogara ndichiisa izvi kuiswa mune yangu maBooks. Iyo Auto-Husiku Musoro inopidigura mavara emapeji nemavara muapp uye inogara ichiisa iyo app kuti iverengeke pakushandisa husiku. Iyo haipe huru, ine hasha inopenya kana uchiverenga husiku, saka zviri nyore pameso ako uye zvakare zvishoma kuvhiringidza kune vamwe. Kunyangwe hazvo marongero aya akagadzirirwa kushandiswa kwehusiku, ndinoramba ndichiita nguva dzese, sezvo ini ndichingoona zviri nyore kuverenga nawo.
Aya marongero anowanikwa mu maBooks app pachayo, iyo yakavhurwa nekutepa pane iyo TO TO chiratidzo kumusoro kwepamusoro kwekona. Izvi zvinovhura font sarudzo ye maBooks, kusanganisira saizi, mafonti, uye ruvara rwechiso uye mazwi. Iko kune yakafanana mamiriro mune mamwe maapplication, senge Kindle , kwaasina kudanwa Musoro Weusiku , asi zviri nyore Sarudza Dema kune iyo Screen . Aya marongero akanaka kune vaverengi nekuti zvinongokanganisa maapp eBook uye kwete iyo yese iPhone.
Husiku Shift On: Kushanda Wechitatu Shift
Husiku Shift yakanaka pakudzikisa kupenya nekuti inoderedza mwenje webhuruu unouya kubva kune iyo iPhone skrini. Masayendisiti anoti mwenje webhuruu unobva pazvishandiso zvedu uri pachiratidziro chechiedza chinotaurira pfungwa dzedu kuti dzirambe dzakamuka, zvinoreva kuti kuverenga pakati pehusiku kuri kukuvadza maratidziro edu ekurara.
Husiku Shift inogadzirisa iyo dhizaini kune yakawanda yeyero-orenji, saka haina kunyanyisa kuomesa pameso ako mune rima kamuri. Zvekare, kana iwe ukagadzirisawo iyo Kupenya yeiyo skrini uchiri kushandisa iyi modhi, ichaita kuti kifaa chako chisanyanye kuvhiringidza vamwe, uye netariro chichava chishoma chekumuka-kusimudzira, izvo zvinobatsira munhu wese kurara zviri nani.
Iyi shanduko inonyengera kwazvo padanho repamusoro reiyo modhi, asi iwe unogona kuita kuti skrini iwedzere kunyanyisa orenji uye uwedzere mutsauko mukuchinja. Iyi modhi ine inokurumidza On / Off bhatani mu Kudzora Center , asi ine zvimwe zvingasarudzwa mu Zvirongwa> Ratidza & Kupenya> Husiku Shift. Pano unogona kuiisa ku Yakarongwa , saka zvinongoerekana zvarova mune imwe nguva. Kunyangwe iwe ukaibatidza pamurume, inodzima otomatiki na7: 00 a.m. Iyi skrini yemenyu ndipo zvakare paunogadzirisa kudziya kwetoni kusuduruka kuti ienderane nezvaunoda.
iOS 10 Sneak Peek: Kuisa Nyowani! Ratidza Nzvimbo dzekugara
Uye Chengetedza Bhawa Kuti Udzikise White Point
Mu Kuwanika menyu, pane sarudzo nyowani inonzi Ratidza Nzvimbo dzekugara. Panzvimbo imwechete iyo iwe yaunowana Inverts Colors uye Grayscale muRudzi Mafirita , iwe unowana zvakare nyowani yekugadzirisa inotsvedza bhaa ye Deredza White Point. Izvozvi mukati iOS 9 , marongero e Deredza White Point inowanikwa mu Kuwanika menyu pasi Wedzera Kusiyanisa, asi kuigadzirisa hakuite mutsauko mukuru.
Deredza White Point yakaendeswa kune ino nyowani menyu iri pasi pasi Ratidza Nzvimbo dzekugara mukati iOS 10 uye ine bhaidhi nyowani inotsvedza inoita musiyano wakakura mukujeka kwescreen . Kana iwe ukafambisa inotsvedza nzira yose kuenda ku100%, zvinoita kuti skrini yako ive nerima zvisingaite, kunyanya kana iwe ukasvibisa iyo Kupenya yechidzitiro. Ona mutsauko apa:
Aya marongero anogona kuita kuti skrini yako inyatso kuve yakasviba, saka haizopa chero mwenje unopenya - hunyanzvi hwekushandisa foni yako munzvimbo ine rima. Ingova wakangwarira kuti usaita kuti kuve nerima zvekuti haugone kuona iwo ma icon!
Ini ndinoshandisa dzese idzi nzira mune akasiyana mamiriro kuti ndishandise yangu iPhone husiku, kazhinji kwete kuvhiringidza vana vangu pavanoda kuenda kunorara. Ndichiri nemwanasikana wangu mucheche akarara neni mumba, uye dzimwe nguva patinofamba, tinofanirwa kugovana kamuri yehotera, saka nzira idzi dzinondibatsira kuti ndisanetse mhuri yangu pandinoda kuverenga manheru.
Handina kumboshandisa iBooks app kuverenga kusvikira ndawana izvi marongero nekuti mwenje waive nehasha uye wainetsa vamwe, uye ini handina kuwana sekunakirwa kwekunzwa ndichiverenga pane yangu iPhone. Ndakaverenga zvimwe zvakawanda paemaBooks izvozvi kuti ndikwanise kugadzirisa mwenje, uye yangu iPhone inogona kutakura mamwe akawanda mabhuku kupfuura angaita bhegi rangu!
Shandisa izvi marongero ekuverenga pakati pehusiku kune zvemukati zvemwoyo wako kana kuve iPhone ninja munhandare, uye hapana anozove akachenjera!